Cishe uyazi ukuthi uma uthinta yezimbabazane kuzoba khona ukuncinza? Lokhu kungenxa yokuthi amaqabunga awo, sifanamsindvo yizinwele mncane okuyinto, nabo amakhemikhali isikhumba abakucasulayo ikhishwe. Noma kunjalo, akudingekile salokhu ukugwema sembabazane. Kuyokumangaza ukuthi, kodwa inkomishi yetiye sembabazane uyakwazi kweso ukunikeza freshness amandla!
Lesi sitshalo yaziwa nangokuthi Urtica dioica (sembabazane) ngesiLatini has amagugu ecebile ngezindleko zemithi engamakhambi. It iye yasetshenziswa njengomuthi isisu kusukela eNkathini Ephakathi eYurophu nase kuyinto tonic esihle kakhulu kwabesifazane.
Ngo inkomishi yetiye kusukela sembabazane uqukethe amavithamini A, B no-K, riboflavin, niacin, i-folic acid, ama-carbohydrate (71.33%), amafutha (2.36%) kanye namaprotheni (25.8%). Kuyinto futhi unothile amaminerali ezifana ne-calcium, okusansimbi, i-potassium, phosphorus, manganese, zinc, nethusi magnesium.
Sembabazane kunconywa kakhulu ngezici zawo yokudla okunempilo namakhambi okwelapha, kodwa ake uthole ukuthi yini izinzuzo itiye sembabazane.
1. Ingabe nethonya elihle ukugaya
Phuza itiye wenza kusukela sembabazane ukuthola impumuzo kuleyo ukuqunjelwa, ukucanuzela kwenhliziyo, igesi anda, nesifo futhi yesifo celiac. Iphinde kuvimbela uhudo, obulala izimpethu kanye nezinambuzane.
2. Yehlisa izinga le-cholesterol egazini
Sembabazane iqukethe beta-sitosterol, esiza ukunciphisa ukumuncwa cholesterol umzimba futhi ngaleyo ndlela kuqinisekisa ube nenhliziyo enempilo nokuvaleka kwemithambo.
3. Inikeza elungile iseli isakhiwo
Esintinyelayo amumethe flavonoid, ezifana quercetin, ezithinta izakhiwo antioxidant. Tea sembabazane akhiphe kusiza ukuvikela i-DNA ne-cell ulwelwesi kusukela umonakalo odalwe radicals khulula.
4. ineqhaza ekuvimbeleni izinkinga kwesinye futhi ezinso
amahlamvu Itiye of sembabazane kuyinto isisu zemvelo, kuyasiza ukugcina amanzi ukugeleza kwamanzi ngokusebenzisa nezinso esinyeni urinary, kanjalo uvimbele ukudala ezinye inqubo crystallization (kumiswa amatshe) ku izinso. Ngokusho Journal of Herbal pharmacotherapy, esebenzisa itiye sembabazane Ungasusa ubuthi ngomgudu womchamo, kanye ukuthuthukisa umphumela izidakamizwa asetshenziselwa ukwelapha pheshana urinary nezifo.
5. IzEnzo ekudambiseni izinhlungu yemvelo ukuthi Kuyancipha lo ubuhlungu arthritis kanye muscle ubuhlungu
Sembabazane isetshenziswa kusukela kudala ukuze nokwelashwa arthritis. Ucwaningo kusekela isiphetho sokuthi isicelo ngezihloko ezihlukene sicashunwa amahlamvu sembabazane ingasiza ekudambiseni ubuhlungu bamalunga. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa itiye kusuka amaqabunga ezikhishwe sembabazane kanye izidakamizwa eqeda ukuvuvukala nonsteroidal (ama-NSAID) kusiza abantu ukunciphisa umthamo yokugcina.
6. Ungakwazi aphathe eczema nezinye izifo zesikhumba
itiye sembabazane kusiza ukukhipha yonke ubuthi emzimbeni. Lokhu, kusiza isikhumba ihlanzekile futhi usiza aphathe eczema.
7. Isetshenziswa njengesici ikhambi ngokwemvelo komzimba
Tea sembabazane kokubili akunqandi futhi uphatha komzimba ezihlobene izinguquko ezithile zonyaka, ezifana ukulunywa, rhinitis iguliswa nokuthimula. Izimbabazane kusiza ukuphungula inani histamine ezivezwa imigwamanda i allergen, ngakho odokotela libeke sembabazane nqabela-omisiwe ukuvimbela ethimulisayo.
8. Ukwelashwa ingozi Hyperplasia Prostatic (BPH)
Ngokwe-Medical Centre e-University of Maryland, sembabazane kabuhlungu isetshenziswa ukwelapha BPH eYurophu. izifundo Laboratory luye lwabonisa ukuthi sembabazane ingasebenza njengendlela finasteride (umuthi osetshenziselwa ukwelapha ingozi Hyperplasia Prostatic) ekunqandeni ukuphindwaphindwa wendlala amaseli, nakuba lokho akusenzi ubukhulu wendlala. Kodwa ososayensi babe ucwaningo kodwa kudingeka okwengeziwe kule ndawo ukuze uthole ukuthi sembabazane kunciphisa izimpawu BPH.
9. tonic kuhle abesifazane
itiye sembabazane kuyinto okunothe futhi isiza kanjani ukulwa nesifo sokuntuleka kwegazi. Abesifazane abakhulelwe Kunconywa ukuphuza itiye sembabazane ukuvimbela ukopha futhi wenze izithelo eqinile. Sembabazane futhi isebenza njenge-agent ekhuthaza ekukhiqizeni ubisi e lactating omama. Abesifazane abasha Ungase futhi baphuze itiye wenza kusukela sembabazane, ukuvimbela ukuvuvukala futhi cramping ezihambisana kokuqala nomjikelezo wokuya esikhathini. Lesi sikhungo futhi kunciphisa fibroids, ulawula umjikelezo wokuya esikhathini futhi kuvimbele izimpawu menopause kwabesifazane ngu-estrogen.
10. Kusiza ukugwema isifo sikashukela kanye nezinkinga nangomfutho wegazi
Ukuphuza itiye sembabazane kusiza ukunciphisa amazinga kashukela egazini. Yemvelo izakhiwo isisu futhi usize ukunakekela blood pressure.
11. Kwenzeke izindlela eziphumelelayo ngoba inhlanzeko yomlomo
Kubi inhlanzeko yomlomo ungaba engakhi yamthinta empilweni yakho. Gingivitis futhi qwembe zamazinyo kungaholela onukayo futhi ulcer emlonyeni. Gingivitis kungagwenywa ngokusebenzisa akhiphe itiye of sembabazane ne mouthwash.
12. Yehlisa ukopha zangaphakathi
Tea sembabazane zaziwa bakwazi ukunciphisa lesizalo, ukopha acinene futhi ukopha esiswini. Kodwa sicela, ningakwenqabi ukuba ngilidlulisele onguchwepheshe uma uthuthukisa nokopha simbe! itiye sembabazane angasetshenziswa ukwelapha imihuzukwana.
Uma ukufinyelela izitshalo fresh, ungakwazi wawoma kalula amahlamvu sembabazane elangeni ke ukwenza itiye. Noma ukuthenga impahla eluhlaza ngomumo ekhemisi.
Ukuze wenze itiye, udinga nje esisodwa noma ezimbili amathisipuni amahlamvu sembabazane omisiwe yenza inkomishi yamanzi abilayo futhi ake ume for 5-10 imizuzu. Zonke ukuphulukiswa yakho isiphuzo ulungile! Ukuze kusizakale wanezela, ungakwazi ukwengeza i ukumnika empandeni sembabazane. uma uthanda, engeza lemon noju ukuze uthuthukise ukunambitheka kanye nephunga elimnandi.
Ungasebenzisa futhi itiye sembabazane izikhwama ngomumo eyenziwe, okuyinto ekahle kakhulu uma ungekho ekhaya.
Njenganoma iyiphi enye ithuluzi, itiye sembabazane kungabangela imiphumela emibi. Ngakho-ke, abesifazane abakhulelwe nabancelisayo kufanele omama uxhumane nodokotela wakho ngaphambi kokuzama itiye wenza kusukela sembabazane noma ukwethula ke ekudleni kwakho.
Banikezwe izinzuzo ngenhla itiye sembabazane, singasho ukuthi yisisombululo jikelele cishe zonke izinkinga zempilo! Ukukwenza ihlupha, uyobe ukuqinisekisa ngokwakho ikusasa enempilo!
Izakhiwo ewusizo itiye Hibiscus kanye contraindications. Indlela yokwenza nokuthi ukuwaphuza?
I-comedy enhle kakhulu
Umchamo Lizoguqubala ingane: izimbangela